४९ लघुवित्तको नाफा ३ अर्बभन्दा बढी
धेरै नाफा कमाउनेमा छिमेक लघुवित्त
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्ने ४९ ओटा लघुवित्त कम्पनीले कुल रू. ३ अर्ब ८५ करोड नाफा कमाएका छन् । यी कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रू. ३ अर्ब ९७ करोड नाफा कमाएका थिए । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नाफा ३ दशमलव १३ प्रतिशतले कमी आएको हो ।
नेप्सेमा ५० ओटा लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत छन् । ५० ओटामध्ये एक नेपाल सेवा लघुवित्तले भने वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४९ ओटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले रू. ५९ करोड १८ लाख नाफा कमाएको छ । धेरै नाफा कमाउनेमा दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः निर्धन उत्थान लघुवित्तले रू. ४७ करोड ३२ लाख र साना किसान विकास लघुवित्तले रू. ४३ करोड ५० लाख कमाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४९ ओटामध्ये २२ ओटा कम्पनीको नाफा घटेको छ भने बाँकी कम्पनीको नाफा बढेको छ । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी नाफा सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सको नाफा २२० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २० लाख ७० हजार नाफा कमाएकोमा चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रू. ६६ लाख २८ हजार नाफा कमाएको हो ।